Fihotsahan’ny tany – Tsimialonjafy Andohalo: fatin-jaza iray hita omaly, an-jatony ireo nafindra toerana | NewsMada
Fihotsahan’ny tany – Tsimialonjafy Andohalo: fatin-jaza iray hita omaly, an-jatony ireo nafindra toerana
Mitohy hatrany ny fikarohana ireo razana heverina fa mbola tavela tao ambanin’ireo trano nihotsaka teny Tsiamialojafy Andohalo. Fantatra fa nisy fatin-jazakely iray indray hitan’ny mpikaroka, omaly. Razana fahasivy hita teny an-toerana io izany, raha afakomaly, nahitana roa. Mitohy ihany ny fikarohana, ary mbola tsy mijanona izany. Ifandrimbonan’ny mpamonjy voina sy ny miaramila ny fizahana atao eny Andohalo. Eo ihany koa ny fanaraha-maso ny amin’ny mety mbola hisehoan’ny loza.
Voalazan’ny avy amin’ny kaominina fa miisa 86 ireo olona tsimanan-kialofana sy voatery nafindra toerana, ka napetraka etsy amin’ny INFP Mahamasina. Miisa 72 ny tra-boina ao amin’ny distrika Antananarivo faharoa. Miisa 116 koa ny efa olona nalana tamin’ny trano fonenany, ary 40 nanampy ireo tra-boina nalefa eny Andoamandry.
Mbola maro ireo toerana tandindonin-doza sy ahina mbola hihotsaka, misy ihany koa ireo mbola tsy nandao ny trano fonenany, ka anaovan’ny tompon’andraikitra, ny eo anivon’ny Sampanana mpamonjy voinan’ny CUA etsy Tsaralalana Analakely, fanentanana hatrany mba hialan’izy ireo amin’ireny trano tandindonin-doza ireny, hisorohana ny loza.